Beesha Caalamka oo ka hadashay arrimaha doorashooyinka, amniga iyo dhaqaalaha ee Soomaaliya. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Beesha Caalamka oo ka hadashay arrimaha doorashooyinka, amniga iyo dhaqaalaha ee Soomaaliya.
Beesha Caalamka oo ka hadashay arrimaha doorashooyinka, amniga iyo dhaqaalaha ee Soomaaliya.
Wakiillo ka socda qaar ka mid ah dalaka daneeya arimaha Soomaaliya, ayaa muujiyey muhiimadda ay leedahay in Dowladda Federaalka iyo Dowladaha Xubnaha ka ah Federaalka ay si wadajir ah uga shaqeeyaan wanaajinta dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaan horumarka Dalka.
Hadaladaan ay sheegeen wakiilada saaxiibada muhiimka la ah Soomaaliya ayaa yimid xilli ay Booqasho ku tageen Magaalada Beydhabo oo xarun ah Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
Kuwani dhammaantood waa qaybo muhiim ah oo ka mid ah nidaam dimoqraadiga ah ee nool oo u oggolaanaya in la maqlo codadka Soomaalida ayuu yiri Md. Swan, isaga oo intaa ku daray in Midowga Afrika, Midowga Yurub, IGAD iyo Qaramada Midoobe ay sii wadi doonaan garab istaagga shacabka Koonfur Galbeed iyagoo dhisanaya mustaqbal wanaagsan.
Previous articleQaramada Midoobay oo kaalmo lacag ah u qorsheysay fatahaadaha Soomaaliya.
Next articleMadaxweynaha Kyrgyztan oo is casilay.